Akụkọ - Gini bu ebe izizi nke igwe eji ebiputa igwe?
Silk ihuenyo ebi akwụkwọ technology, a makwaara dị ka ihuenyo ebi akwụkwọ Usoro, a stencil ebi akwụkwọ technology, na nke a bụ nke mbụ ígwè obibi akwụkwọ technology malitere China. Igwe nyocha ihuenyo ahụ bụ ibipụta ink site na ntupu nke ụkpụrụ a ga-ebipụta na mkpụrụ ahụ site na ịpị ink site na mpịakọta, si otú a na-akpụ otu ụkpụrụ ma ọ bụ ederede na mkpụrụ.
Ngwa: LCD iko, oghere iko, igbe nkwakọ, mpempe ọkụ na-enwupụta, iko mpempe akwụkwọ, anya ekwentị mkpanaka, ngosipụta, ogwe, aha aha na ihe nkiri acrylic, mmetụ ihuenyo, efere ntuziaka ọkụ, TV, ụlọ ọrụ sekit, akpa plastic, ụlọ ọrụ optoelectronics, otu, ihu abụọ, ogwe osisi sekit, PCB mbadamba, mmanụ mmiri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ihe nkiri na-egbu maramara, bọọdụ sekit na-agbanwe agbanwe, sekit na-agbanwe agbanwe, mpempe akwụkwọ, IMD, IML, akwụkwọ mmado, ihe nkiri na-enyefe ọkụ, ụghalaahịa, akara ngosi, akara aha, akwa na-enweghị akwa akpa wdg.
Ngwaahịa ndị e bipụtara site na teknụzụ mbipụta ihuenyo nke igwe na-ebipụta ihuenyo na-enwu gbaa na agba ma nwee ike ịchekwa ya ruo ogologo oge, ha dịkwa mma maka mmepụta ihe mmepụta ihe, yabụ ngwa nke igwe nbipụta igwe na ụlọ ọrụ nwere atụmanya dị mkpa. Anyị nwekwara ike ịhụ ngwaahịa ebipụtara na ihuenyo ebe niile na ndụ anyị, dị ka iko akụrụngwa, iko ụlọ, iko ụlọ ọrụ, ụghalaahịa ngwa ahịa, igbe nkwakọ ngwaahịa, akwụkwọ mmado egbu, wdg .Ọ bụrụhaala na ọ bụ mbadamba ederede, ọ nwere ike ịme ya na ihuenyo igwe obibi akwụkwọ, na ụlọ ọrụ ntinye akwụkwọ sara mbara nke ukwuu.
Uru nke igwe obibi akwụkwọ igwe na-ebi akwụkwọ bụ na ọnweghị oke site na ọdịdị na ogo nke ihe ndị e biri ebi. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụhaala na ọ bụ ala dị larịị ma ọ bụ akụkụ okirikiri curved, enwere ike iji igwe na-ebi akwụkwọ ebipụta ya. Dị ka ihe atụ, mkpịsị akwụkwọ ndị a na-ejikarị eme ihe, iko na ihe ndị a na-a onụ n’ígwè, bọọdụ sekit n’ihe ndị a na-eji ejiji n’ụlọ, ma ọ bụ ụfọdụ ngwa eletrik, dị ka bọtịnụ dị na fon a na-eji agagharị agagharị, tinyere akara ngosi ndị a na-ahụ n’ihe ndị a na-ahụ kwa ụbọchị n’ụbọchị, nakwa usoro ndị a na-eyi n’ụbọchị. Jiri silk ihuenyo ebi akwụkwọ igwe ibipụta. Enwere ike ibipute ihe ndị buru ibu, dịka usoro ederede ma ọ bụ akara log na TV, igwe friji na igwe ncha akwa na ngwa nbipute ihuenyo. A ga-ebipụtakwa akara ngosi mgbasa ozi azụmahịa, akwụkwọ mmado, nkwakọ ngwaahịa, wdg. A na-eji teknụzụ na-ebipụta ihuenyo nke igwe na-ebipụta ihuenyo na ụlọ ọrụ.
Na-aga n'ihu mmepe nke oge a na ihuenyo ebi akwụkwọ technology, ulo oru ihuenyo ebi akwụkwọ technology nke nwetara akpaghị aka unmanned obibi, na-emegharị ka uka obibi akwụkwọ na oge a na ụlọ ọrụ, na n'ezie ghọtara na mmetụta nke unmanned akpaka mmepụta, nke ukwuu belata na-eri nke ụlọ ọrụ. Nrụpụta arụmọrụ emelitere ma wetara ụba ọrụ bara ụba na ụlọ ọrụ ahụ.
Ihuenyo Silk Printing Machine, Igwe Mbipụta Igwe, Glass Screen Printing Machine, Silkscreen Printing Machine, Akpaaka Screen Printing Machine, Silk Screen Printing Machine,